Ciidamada Woyanaha oo Guluf xoogan kawada dhulka Qomiyada OMO. | ogaden24
Ciidamada Woyanaha oo Guluf xoogan kawada dhulka Qomiyada OMO.
Wararka ka imaanaya dalka Itobiya ayaa sheegaya in Qaybaha kala duwan ee ciidamada Woyanuhu Hawlgal balaadhan kawadaan, Gobolka Omo ee Koonfurta Itoobiya oo bilihii lasoo dhaafay uu kasocday kacdoon kadhan ah maamulka kooxda TPLF.
Warku waxaa uu sheegayaa in ciidamada Woyanuhu deegaamada Qabiilka Omo-ga ay kabilaabeen olole ay xabsiga kudhigayaan dhamaan dadka taageersan kacdoonka lagaga soo horjeedo kooxda TPLF, waxayna xabsiga dhigeen dad caan ka ah Gobolka Omo oo ay kujiraan Hogaamiyayaasha dhaqanka iyo kuwa siyaasada.
Xukuumada wayaanaha ayaa aaminsan in ay kacdoonada socda dabada kariixayaan dadka hantiile yaasha ah iyo kuwa caanka ah sida aqoonyahanka iyo salaadiinta beelaha, sidoo kale kooxda TPLF ayaa ilgooni ah kuhaysa Fanaaniita iyo Culimada.
Qoomiyada Omo ee kudhaqan Koonfurta Itoobiya ayaa bilo kahor kusoo biirtay kacdoonka lagaga soo horjeedo kooxda TPLF waxayna qoomiyadu go’aan satay in ay xoriyad gaadhsiinta shacabkooda umaraan wado kasta oo lagu gaadhi karo.
Xukuumada wayaanaha ayaa isku dayaysa in ay kacdoonada lagaga soo horjeedo afka qabtaan iyagoo samaynaya cabsi galin aad ubadan si ay shacabku uga hakadaan rabitaan kooda.
Sidoo kale kooxda TPLF ayaa bilowday in ay xasuuqii kasocday Oromia iyo Gobolka Axmaarada usoo wareejiso Qoomiyadaha kale ee kacdoonka wada sida Conso, Agew, Hararida iyo qoomiyada Omo.
Dadka ka faalooda arimaha Itoobiya ayaa sheegaya in aysan isku dayadaasu waxba soo kordhinaynin isla markaana ay siibadinayaan nacaybka loo qabo.